အမူအကျင့်စွဲပြင်ပလူနာဆေးခန်းရှိကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ထားသောလိင်စွဲသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲပြင်ပလူနာဆေးခန်း (2016) တွင် Self-ဖော်ထုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 အောက်တိုဘာ 24: 1-8 ။
Wéry A1,2, Vogelaere K1, Challet-Bouju G3,4, Poudat FX3, Caillon J3,4, အသည်း D3, Billieux J1,2, Grall-Bronnec M3,4.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအပေါ်သုတေသနပြုမှုသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုတိုးများလာခြင်းမှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများစုဆောင်းနေသော်လည်းကုသမှုခံယူနေသည့်လူနာများ၏နမူနာနမူနာများတွင်စုဆောင်းထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများမှာရှားပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းသူများ” ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ (လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ လိင်အလေ့အထများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
နမူနာမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးပြင်ပလူနာကုသမှုစင်တာတိုင်ပင်တဲ့သူ 72 လူနာရေးစပ်ခဲ့သည်။ ဒေတာများကိုစနစ်တကျအင်တာဗျူးနှင့် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာတစ်ခုပေါင်းစပ်မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ လူနာအများစုသည်အသက် ၂၀ မှ ၇၆ နှစ်အတွင်းရှိအသက် (၉၄.၄%) အထီး (ဆိုလိုသည်မှာ ၄၀.၃ - ၁၀.၉) ဖြစ်သည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုစစ်ဆေးသည့်အတည်ပြုချက်သည်သတ်မှတ်ထားပေါ် မူတည်၍ ၅၆.၉% မှ ၉၅.၈% အထိရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအရအမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်မှုအားနည်းခြင်းရှိသည်မှာမျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံဖက်များ (၅၆%)၊ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု (၅၁.၉%) နှင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံ (၄၃.၆%) ကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ လူနာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကစိတ်ရောဂါကုသမှုကိုထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ၆၀.၆% ကအနည်းဆုံး paraphilia တစ်ခုတင်ပြခဲ့တယ်။
နိဂုံး ရလဒ်များအလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးနှင့်အပြုအမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပရိုဖိုင်းအဖြစ်ပါဝင် comorbidities ပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အကောင့်ထဲသို့အဆိုပါရောဂါ၏ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောယူခြင်းအားဖြင့် လိုက်. psychotherapeutic ကြားဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။
comorbidities; အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; hypersexuality; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ